MUQDISHO OO QARKA U SAARAN DAGAAL SOKEEYE
Saturday January 08, 2022 - 21:47:38 in Maqaallo by Wariye Tiriko
MUQDISHO OO QARKA U SAARAN DAGAAL SOKEEYE FARMAAJO WAA NIN SIDEE AH?
Dagaal sokeeye waa wax Ilaahay laga magangalo, wax lagu degdegana maaha haddii aanay jirin waxyaabaha sababikara dagaal sokeeye oo la isku badbaadinayo. Dhaqamada khatarta ah ee Farmaajo ayaa sababikara halista dagaal sokeeye oo ka dhaca Muqdisho. Dagaal sokeeye wax lagu degdego maaha, Farmaajana wax la sii eegankaro maaha.
Farmaajo waa nin waxa uu ku hadlo ay beentahay, waxa uu bixiyo ay laaluush tahay, waxa uu ku mashquulsanyahay ay shirqool tahay, waxa uu amrana ay dhagartahay. Waa nin ay kala tageen isaga iyo wadaninimo, dawladnimo iyo qaranimo kana doortay qabiil iyo xukun jacayl ah dhuxul dambas huwan, waa nin ku shaqaysta qabiil iyo danayste uu xusho oo ah maangaab la mid ah caws iyo biyo ku nool, waa nin arxan-laawe ah, dilaa ah, ciil-qabe ah oo dembikasta oo xun u gala kursiga iyo aargoosi, waa nin la aamusan xumaan iyo cadaawad, waa nin ay ka go’antahay inuu noqdo oo ku faano Afwerkiga Somalia oo ah duruusta uu siiyo macallinkiisa, Isaias Afwerki oo dadkiisii ka dhigay wax carara, wax uu laayo iyo wax uu xoog ku haysto, dalkiisana loo yaqaan Kuuriyada Waqooyi ee Afrika. Waa kaas Farmaajo, waa kelitaliye ma naxe ah, waa halis qaran.
FARMAAJO YAA XUKUMA OO KU HAYA VILLA SOMALIA?
Farmaajo waa nin ay toos u xukumaan Abiy Ahmed iyo Isaias Afwerki oo la tashada tallaabakasta oo uu qaadayo, horena ugu hibeeyay dalka iyo dekedaha Somalia taas oo uu dhaafsaday in lagu hayo xukun kelitalisnimo qabiil inta uu nool yahay (life-long dictator), iyaga ayaa ku amra inaanu ka bixin Villa Somalia iskuna dhejiyo kursiga, doorashadana horjoogsado, waana heshiiskii dhagarta iyo khiyaamada qaran huwanaa ee loo maleegay Somalida Geeska Afrika laguna saxeexay caasimada Axmaarada, Bahardaar 2018.
Abiy Ahmed, oo ah dembiile dilaa ah oo dalkiisa iyo dadkiisa ku burburiyay xukun jacayl, waa ogyahay in haddii laga adkaado Farmaajo uu waayayo dekedaha uu Farmaajo sida sharcidarrada ugu saxeexay, markaas waa inuu markasta ku qasbaa inuu xoog ku joogo madaxtooyada ilaa uu dekedaha gacanta ku dhigo. Farmaajo haddii aanay Beesha Caalamku sandullayn, xoogna uga saarin madaxtooyada, waxa keliya oo uu Farmaajo kaga baxayo Villa Somalia waa dagaal sokeeye.
MAXAA SABABIKARA DAGAAL HALIS AH OO KA DHACA MUQDISHO?
Muqdisho waxay qarka u saarantahay dagaal sokeeye sababta oo ah waxaa si cad uga jira waxyaabaha sababa dagaalka sokeeye. Dagaal sokeeye waa lama huraan marka kelitalisnimo qabiil laasho dastuurka iyo laamaha dawladnimada, ciidan qabiil laguu dhisto, doorashada lagaa horjoogsado, lagaa qaado xorriyadda hadalka iyo dhaqdhaqaaqa, sharaftaada iyo cirdigaaga meel looga dhaco, cabsi iyo cabburin aad ku nooshahay, hal-doorkaaga mid mid loo dilo, hantidaada la boobo laguna koriyo qabiil gaar ah, lagugu gumaysato degaankaaga, horumarka iyo shaqadu istaagaan iwm.
Dadka Muqdisho ayaa maanta ku nool xaaladaas, waxayna runtii qarka u saarantahay dagaal sokeeye oo ay iskaga xorayso kelitalisnimada Farmaajo ee laga xukumo Addis Ababa iyo Asmara iyo kooxdiisa isla markaana lagu badbaadinayo lahaanshaha Somaliyeed ee dalka, qaranimada iyo dawladnimada. Noloshu waxay qiimo leedahay markaad haysato nabad, xorriyad iyo sharaf aad ku raadsato nolol iyo horumar, cadowgaaguna aanu haweysan #dhulkaaga, #qaranimadaada iyo #dawladnimadaada.
MUXUU FARMAAJO KU MASHQUUL YAHAY, YAA LA TASHA, MUXUU MAAGANYAHAY?
Farmaajo kuma mashquul aha nabadda, horumarka iyo maslaxadda ummada, waxaa uu mashquul ku yahay ciidan dhis iyo inuu Muqdisho ku wareejiyo xeryo ciidan daacad u ah si uu magaalada dagaal ugu qabsado una laayo cidkasta oo ka soo horjeeda. Waxaa uu xiriir joogto ah la leeyahay Sirdoonka Eritrea oo kala taliya sidii uu dalka ugu qabsanlahaa ciidan iyo siduu u laynlahaa cidda ka soo horjeeda xukunkiisa. Markaas waa waajib lama huraan ah in kelitaliye Farmaajo la iska xoreeyo oo la iska badbaadiyo inta aanu xoogaysan oo ummadda u horseedin xasuuq, qax iyo burbur. Xaaladu waa qaylodhaan qaran.
Abiy, Farmaajo iyo Afwerki